Ahoana ny fomba hanafoanana sy hamafana cookies ao amin'ny Safari | Avy amin'ny mac aho
Cookies, ireo cookies faly izay aorian'ny ezaky ny Vondrona eropeana, hampahafantatra amin'ny mpampiasa amin'ny fotoana rehetra ny fanao amin'ny pejin-tranonkala, dia manery antsika hanaiky ireo teny isaky ny mitsidika tranonkala iray izahay Cookies dia rakitra kely iray izay tompon'andraikitra amin'ny fitahirizana fampahalalana momba ny fampiasantsika pejy web, toy ny ny fiteny na ny fampisehoana tiany.
Fa ankoatr'izay dia tompon'andraikitra amin'ny fanarahana ny fivezivezantsika amin'ny pejin-tranonkala hafa ihany koa izy io, mba hahafahan'ireo serivisy fanaovana dokambarotra manatona azy ireo ary hahafahany mampiseho azy ireo mifantoka amin'ny zavatra tsy tena mahaliana amin'izany fotoana izany. Miaraka amin'ny macOS High Sierra, nampanantena i Apple fa hampihena ny fanarahan-dia ny cookies sasany amin'ny alàlan'ny Safari, fa mety tsy ampy ho an'ny mpampiasa sasany izany.
Saingy ny cookies dia tsy "namana ratsy" foana, fa matetika izy ireo dia afaka manampy betsaka antsika, fa ny fampiasana sy ny mahasoa azy ireo dia nanjary demonia noho ny fampiasana diso ny orinasa sasany momba ny vaovao azony atao momba antsika. Raha te hahita ny fiainana ianao raha tsy misy cookies na te hamafa ny cookies rehetra voatahiry ao Safari ianao, dia asehonay anao ny fomba ahafahanay hamafa ny cookies an'i Safari.
1 Karazana fampahalalana inona no tahirizin'ny Safari momba ny fizotranay?
2 Hamafa ny cookies rehetra ao amin'ny Safari
3 Fafao ny cookies manokana ao Safari
4 Ahoana ny fomba hanakanana cookies amin'ny Safari
Karazana fampahalalana inona no tahirizin'ny Safari momba ny fizotranay?
Safari, toy ny mpanamory rehetra ampiasainay tsy tapaka, afaka mitahiry angona samihafa amin'ny solo-saintsika toy ny cookies, ho fanampin'ny cache mahazatra. Fa ho fanampin'izany, afaka manana fidirana amin'ny ekipanay ihany koa izy ireo, fidirana izay nomenay alàlana teo aloha rehefa mampakatra sary amin'ny tranokala. Raha te hahafantatra izay karazana fidirana amin'ny pejin-tranonkala sasany ananan'ny ekipanay sy ny karazana data tahiry izahay dia tokony hiditra amin'ny Preferansa System> Tsiambaratelo.
Manaraka izany, mankany amin'ny bokotra Manage Website Data izahay. Ao amin'ny varavarankely izay miseho etsy ambany, mankany amin'ny boaty fikarohana hita eo amin'ny zoro ambony ambony izahay ary mampiditra ny teny fikarohana. Ao amin'ny boaty valiny, haseho miaraka amin'ny ny pejin-tranonkala ny alalana rehetra anananao hitahirizana atiny sy hidirana amin'ny ekipanay.
Hamafa ny cookies rehetra ao amin'ny Safari
Raha te hiditra amin'ny cookies izay itehirizan'ny Safari dia tsy maintsy miditra voalohany amin'ny Safidin'ny Safari, ary mankanesa any amin'ny kiheba Privacy.
Ny safidy voalohany mampiseho amintsika ny toe-javatra miafina ao amin'ny Safari, dia ilay nolazaiko anao momba ny fiasa izaymanahaka ny fanarahana ny pejin-tranonkala momba ny fitetezana anay, fiasa iray izay avy amin'ny tanan'ny macOS High Sierra.
Raha te-hiditra amin'ny cookies rehetra izay efa notahirizin'i Safari tamin'ny fitetezana antsika sy ireo pejin-tranonkala izay notsidihintsika dia tsy maintsy tsindrio Tantano ny angona momba ny tranokala.
Rehefa afaka segondra vitsy, pejin-tranonkala rehetra izay mitahiry amin'ny solosaina misy karazana fampahalalana avy amin'ny hetsika, cookies, na avy amin'ny tranokalanao toy ny cache.
Raha hamafa ny cookies rehetra izay voatahiry ao amin'ny solosaintsika, toy ny cache voatahiry, dia tsy maintsy mankany amin'ny bokotra isika Fafao daholo.
Manaraka izany dia haseho ny hafatra fanamafisana, hafatra izay tsy maintsy hamafisinay amin'ny alàlan'ny bokotra Fafao izao.
Fafao ny cookies manokana ao Safari
Fa raha tsy te-hamafa ny cookies fotsiny amin'ny pejin-tranonkala manokana isika dia afaka manao izany ihany koa, amin'ny alàlan'ny boaty fikarohana izay eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny efijery, misafidy ny tranonkala manokana ary manindry Delete. Ity dingana ity ireo izay mifandraika amin'ilay tranonkala ihany no hamafana nosafidianay nefa tsy misy fiatraikany amin'ny pejy web sisa izay notsidihinay.
Vantany vao nesorinay ny cookies rehetra izay efa notehirizinay tamin'ny fitaovana nampiasainay, isaky ny mitsidika pejy web izahay, dia haseho hafatra izay Ampahafantarina anay ny fampiasana anao amin'ny cookies izay hotehirizina amin'ny fitaovanay, hafatra mahafaly izay haseho amin'ny tsirairay amin'ireo pejin-tranonkala izay tsidihinay indray.
Ity dingana ity, tsy misy fiatraikany amin'ny teny miafina notehirizinay tao amin'ny fitaovantsika, satria voatahiry amin'ny alàlan'ny keychain iCloud ireo, mba hahafahantsika mamafa ireo fampahalalana rehetra ireo nefa tsy misy fiatraikany amin'ny lakileny notehirizintsika tao amin'ny solosaintsika sy nampifandraisina tamin'ireo solosaina rehetra mifandraika amin'ilay Apple ID iray ihany.
Ahoana ny fomba hanakanana cookies amin'ny Safari
Raha te hisoroka ny pejin-tranonkala tsy afaka mitahiry cookies amin'ny solosaina isika dia tsy maintsy miditra amin'ny safidin'ny Safari sy Privacy. Ao anatin'ny fizarana data Cookies sy tranokala, hitanay ny safidy Sakano ny cookies rehetra. Ity safidy ity dia afaka mametra ny fitsidihana pejy web sasantsasany izay hanehoana aminay ny mombamomba azy ireo tokony hampiasa cookies, noho izany tsy tsara ny manisy marika azy.
Rehefa manamarina ity boaty ity ianao dia ho tonga ho azy i Safari hanafoana ny cookies tsirairay izay voatahiry ao amin'ny solosaintsika, satria raha tsy izany dia tsy misy dikany ny manohy manangona azy ireo ao amin'ny solosaintsika, noho izany dia mila mazava tsara momba an'io dingana io ianao alohan'ny hanaovana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hanafoanana sy hamafana cookies ao Safari